Ukulobola (isigaba emshadweni wesintu) – iAfrika
Isihloko sokulobola sihlobene nomgcagco wesintu. Phambilini sike saloba ngokuthi ilobolo selenziwa ihlaya kanjani namhlanje ngenxa yabantu asebeliphendule inhlekisa ezweni. Kodwa-ke into eyenza lokho noma isizathu salokho yingoba ngisho sezishintshile izinto, njengoba siphila esikhathini samanje lapho abantu sebawayeka khona amasiko, kodwa lelisiko lokulobola alipheli. Okwenzekile ukuthi selishintshile kunangendlela ebelenziwa ngayo phambilini esikhathini sasemandulo. Noma bebaningi-ke abagxeka lelisiko lokulobola, ngoba-ke vele alikho isoka elingenasici, kodwa okubalulekile ngaleli siko ukuthi akusikho nje ukuhambisa izinkomo kubo kwangoduso yakho, kodwa lelisiko lihlanganisa imindeni yomibili njengoba ukuganiselana ngokwesintu kumayelana nokwakhelana ubudlelwano. Yingakho nje uma kulotsholwa abakhongi belibeka ngembaba ukuthi bazocela isihlobo esihle, lokho bekwenza besamemeza ngaphandle, ngaphambi kokuba bamukelwe lapho abazocela khona isihlobo esihle.
Ukulobola lokhu akugcini ngezinkomo kodwa ke kuphinde kutshengise abazali bengoduso le ezogana ukuthi cha yebo umkhwenyana uzokwazi ukunakekela indodakazi yabo ayondle ingabulawa inkemane ebe ekhona umkhwenyana wayo okufanele ngabe uyayondla. Ukulobola kuphinde kube umlayezo emadlozini noma kwabadala ukuthi kuzoganiselwana, njengoba kuqala ngokushiswa kwempepho uma kuzohanjiswa izinkomo zokulobola ekhaya. Ukulobola kuphinde kusho khona ukuthi noma zingaba khona izinselelo emshadweni abashadikazi bazokwazi ukuzilungisa ngaphandle kwesehlukaniso noma ngale kokuthi umakoti ashiye umendo ebuyele kubo ngoba phela ilobolo leli liyinto enkulu futhi-ke ngokwesintu azilandwa izinkomo zelobolo. Ukwamukelwa kwezinkomo zelobolo kusho khona ukuthi imindeni yomibili iyavumelana ngokuganiselana kanye nokwakha ubudlelwano. Uma kungekho ukuvumelana ngelobolo, awukho umgcagco oba khona. Kumele kuze kuvunyelwane kuqala ngezinhliziyo ezimhlophe engekho obambele omunye amagama emindenini yomibili, lokhu kuvula indlela emhlophe kulaba abazoshada.
Okwenzeka uma kulotsholwa
Njengoba sidingida indaba yamalobolo nje, kumele iqalwe ekutheni kwenziwanjani uma kuzolotsholwa noma ngosuku lokulobola. Izingxoxo zamalobolo zidingidwa kubo kwentokazi leyo esuke izolotsholwa, yilapho abakhongi besuke bebambe iqhulu ngendaba yelobolo. Abakhongi bafika ekuseni kubo kwentombi bamemeze bemi ngaphandle komuzi besho izithakazelo zakulomuzi abasuka kuwo. Kusuke kuwumkhongi omkhulu lo osuke ememeza ehamba nomkhongi omncane njengomuntu asebenzisana naye, bekhethwe ilensizwa ebathume ukuthi bayocela isihlobo esihle ekhweni layo. Ngalesisikhathi behaya izibongo zakulomuzi abasuka kuwo, abakulomuzi abeze kuwo kubo kwentombi basuke bebabuka nje, kuze kuthi ngesikade emva kwesikhashana bese kuthunyelwa umfana omncane aye ngaphandle kubo abakhongi laba abasuke bempongoloza. Uma sebengeniswe ngaphakathi endlini abakhongi, batshengiswa indawo abazohlala kuyo, emva kwalokho bakhiphe imali ebizwa ngokuthi imvulamlomo, ngaphambi-ke kokuthi baqale badingide udaba okuziwe ngalo.
Uma sekuqalwa kudingidwa indaba yelobolo kuba ngamadoda odwa akhuluma lendaba, okuba abakhongi kanti ke ngasohlwini lwabakhulumela lentokazi ezolotsholwa, kube ngabesilisa basekhaya nabayizihlobo abasuke becelelwe ukusingatha lomsebenzi. Abakubo kwentombi-ke babe sebesho ukuthi bacabanga ukuthi inkokhelo kube into engakanani. Uma abakhongi bebona sengathi kubizwa kakhulu kumba eqolo, bayaye bazikhalele bacele ukuba lithi ukwehlela nganeno inani elibizwayo. Unina wentombi akavumelekile nhlobo ukuthi abekhona ezingxoxweni zamalobolo, uma kwenzekile wangena kulendlu ezibanjelwe kuyo izingxoxo, kuba yinhlawulo.
Ngokujwayelekile kuqala enanini lezinkomo eziyishumi, bese isibalo siyehla noma senyuke. Lokhu okungadalwa izizathu eziningi, njengokuthi lomuntu ozolotsholwa useyintombi yini noma usenezingane, nanokuthi uma enezingane zingaki. Uma kuwukuthi batholane nalo ozomlobola engasesiyona intombi noma enengane, isibalo siyehla. Akuphoqi ukuthi ilobolo likhishwe lonke kanye kanye kodwa-ke kuya ngamandla endoda, ngoba nomgcagco uyaba khona lingakaqedwa ilobolo kodwa-ke kuba nesivumelwano ukuthi zizokhokhwa kanjani noma zizoqedelwa kanjani izinkomo lezi ezisele angakazikhokhi umkhwenyana.
Okwenzakala ngemuva kokulobola
Uma-ke sekuvunyelwene ngenani lezinkomo okuzolotsholwa ngazo, amalungiselelo omgcagco asuke esengaqala kodwa-ke abasemzini baye bacele ingoduso le elotsholiwe ukuthi ike izohlala nabo inyange ibe yinye, okuyilapho abasuke bembhekile khona ukuthi lomuntu usekulungele yini ukuba umakoti ongaphatha umuzi. Ngalesisikhathi esemzini usuke enza konke okwenziwa umakoti, okubalwa ukwenza imisebenzi yasekhaya efana nokupheka, ukutheza kanye nokulungisa igceke uma linokhula. Njengoba inhlonipho kuyinto eqhakambiswa kakhulu esizweni sikaPhunga noMageba, ingoduso ayivumelekile ukubona uyisezala wensizwa, uma imbona kumele imcashele, lokho kukhombisa inhlonipho.
Uma-ke sesiphelile isikhathi lesi obekuhlolwa ngaso ingoduso ukuthi isikulungele yini ukuba umakoti, iphindiselwa emuva kubo uninazala wayo, ifumbathiswe itshali ephindela nalo kubo elisuke liboshwe ngendophi. Kuthi uma unina wengoduso elivula lelitshali, uma libhotshozwe imbobo phakathi kusho ukuthi lowo oselotsholiwe usekulungele ukuba abe umakoti. Uma ke umuntu eselotsholiwe, akabizwa ngentombazane kodwa kuyashintsha ngokwesigaba asuke esekuso empilweni, ubizwa ngeNgoduso, okuthi uma esegcagcile ngokusemthethweni abe esebizwa ngomakoti noma ngomlobokazana.
Indawo lapho izingxoxo zamalobolo kufanele zibanjelwe khona.
9 thoughts on “Ukulobola (isigaba emshadweni wesintu)”
Cela usizo ngencwadi ye lobolo
Yini umsebenzi womkhongi
Cofa lapha ukuthola impendulo Ukukhonga (isigaba emshadweni wesintu)
Mali ukucela intombi enengane
Ukulamba. Cofa lapha ukuthola incazelo Izaga zesiZulu Nokusebenza Kwazo
Manje kuyalotsholwa yini intombi ezolotsholwa ingako khonjwa
Uma ingoduso izolanda umkhonto emzini kukhona yini izintombi ezilungiselwa kona. Kumele zisine yini ngalelonga lokulanda umkhonto
20/10/2019 at 20:55
Ake ubheke nalu ulwazi esinalo: https://iafrika.org/umembeso-isigaba-emshadweni-wesintu/